Buugaagta buugaagta ee Turkiga
Soo Galida BetBoo
Soo galitaanka Betpas
Soo gal Betvole
Soo Galida Celtabet
Gal Gal Milanobet
Soo gal Vegabet
Qaababka sharadka tooska ah ee waddankeenu wuxuu u dhacaa laba marxaladood oo kaladuwan. Mid ka mid ah waa goobaha furan ee sharadka ee Turkiga taas. barta waxaa loo arkaa inuu yahay cinwaan wanaagsan oo wax ka qabta dhibaatada sharciyeed. Kuwo kale waxay khiyaameen in cinwaanka uu maareeyo si firfircoon suuqa, oo asal ahaan ka soo jeeda.. goobaha lagu baari doono macnaha guud ee maqaalkeenna. Cinwaannada ayaa ah mawduuca ugu horreeya ee waddankeenna ka furaya sharad…
Waxaa laga yaabaa in turkiga cayaaraha Toto turki ay ku yaalliin laanta 'Bet’ sidoo kale la aqoonsaday. Waa shirkadda kaliya ee xafiisyada ku leh xafiisyadeed ee ka badbaaday suuqa sannado badan..
sharadka, shirkadda keliya ee sharci ahaan sharad ku ciyaareysa Turkey. Waxaad ka heli kartaa laamood sababahaan meelwalba. Nidaamku wuxuu sidoo kale ku gaadhaa macaamiisha shabakadaha kala duwan ee internetka.
Waa maxay tusaale ahaan, Balaayiin, Nene, waxay muujin kartaa inaan nahay Mackolik ama Oley Iddaa site. Adiga laftaada waad ku xallin kartaa cilmi baaris. Goobahaas waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin goobo khafiif ah oo furan oo ku yaal Turkiga waxayna sameeyaan dhaqdhaqaaq la'aan xanuun la'aan qaababka loogu talagalay bogaggaas, waad qiimeyn kartaa fursadaha la soo bandhigo.
Tixgeli suurtagalnimada xisaabaadka khayaarka xisaabta marka la barbar dhigo shirkadaha kale. Shirkaduhu ma bixiyaan sharadka nooc ka mid ah soo bandhigida sharadka shirkada sharadka dheeriga ah waxay kuxirantahay tayo aad u wanaagsan iyo sharad soo jiidasho leh.
In kasta oo ay ka kooban tahay nidaamyo kaladuwan oo kala jaad jaad ah iyo sharad isboorti shirkadeed. Ma jiro kala-qaybin toos ah guud ahaan iyo dhammaan bogagga internetka ee adeegsanaya nidaamkan., laakiin waad la socon kartaa natiijooyinka tooska ah.
Sababta oo ah xiisahaas xad-dhaafka ah ee kubada cagta ee Turkiga ayaa iskudayaya in la sameeyo khamaaryo leh fursado kaladuwan oo kala jaad ah shirkadaha waaweyn.
Shirkad noocan oo kale ah oo ku timid shirkadda Ingiriiska. shirkaddu waxay la shaqaysaa shirkadda Sportingbet iyo Betboo oo laga leeyahay dalka Turkiga.
hadda waa firfircoon, shirkado badanna waxay leeyihiin saldhig macaamiil ballaaran oo ay la leeyihiin Turkiga.
Goobta waxaa sidoo kale loo yaqaannaa goobaha betaine. Bet micnaheedu waa ereyga Ingiriisiga iyo sharad. Goobta horey loogu aasaasay bartayada ayaa ah betta.
Dhowr ka mid ah
Dhammaan goobahan waxay ka aqbalaan macaamiisha Turkiga. Waxaan sidoo kale sameynay isku-darka sanado khibrad leh markaan aragnay liisaska bogagga.. Halkan waxaa ah si firfircoon u aqbalaya macaamiisha ka timid Turkiga, ka hel dhammaan bogagga internetka ee la isku halleyn karo oo tayada leh.
Labada nooc ee sharadka, suurtagalnimada in goobaha ciyaaraha lagu ciyaaro khamaarka labaad ee shisheeyaha iyo sharraxa mawduuc kasta oo khadka tooska ah laga helo. Tayada Betboo tayo sare leh oo ku qalabeysan nidaamyada amniga ugu adag, tusaale ahaan Bogga oo leh naqshad wanaagsan.
Haddii aad rabto inaad hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan betboo, ka eeg qaybta websaydhka ee betboo.
Si la mid ah, Boggeena sidoo kale wuxuu leeyahay faallooyin ka socda bogag kale. Waxaad sidoo kale dib u eegi kartaa codayntaada maalin kasta liiska meelaha kor lagu soo sheegay.. Goobo khafiif ah oo turkiga ah ayaa loo furayaa dalka Turkiga guud ahaan si habsami leh. Tani waxay fursad weyn u noqon kartaa sharadka.
Ku ciyaarista iyo sharadka dhacdooyinka isboorti ee dalka Turkiga waxaa sharciyeysan. Shuruudaha sharadka tooska ah ee internetka, waa in la buuxiyaa. 17 Abril, 2004 sharadka ciyaarta waxaa maamula agaasinka hay'adda Spor Toto. Ciyaaraha sharadka rasmiga ah ee ciyaaraha isboortiga sida sharadka iyo ganacsadaha guuleysta iddaa.com.t Hay'adaha dowladda ayaa khiyaameeya. ganacsadaha waxaa loo isticmaali karaa sidaad ogtahay, sharadka dhinac kasta oo dalkeenna ah. Kubbadaha sharadka Kubadda Cagta waxaa lagu ciyaari karaa ganacsatadaas. sidoo kale, U oggolow macaamiisha elektaroonigga ah inay ka khamaaraan sharadka internetka 6 Hadday. Ganacsadahan ayaa lagu soo bandhigi doonaa hoosta. goobaha sharadka sharciga ah ee Turkey, oo uu go'aamiyay sharci, oo aan qadka ahayn. tusaale ahaan, Suurtogal ma ahan in lagu ciyaaro kaarka amaahda.
Sidaa darteed, tafatir sanduuqa shey kasta iyo waliba ololayaasha shaqsiyadeed Fursada gunada. Fursadaha deebaajiga iyo ka bixitaanku way xaddidan yihiin. Ciyaar kali ah iyo (marka laga reebo xaalado gaar ah) sharadka lama ciyaari karo sharad toos ah. Sidaa darteed bedel goobaha khamaarka kubbadda cagta shisheeye ee ay doorbidaan punters si sax ah.
goobaha sharadka tooska ah ee tooska ah ee dalka Turkiga
Khamaarka: Xaashiyaha ay maamusho shirkadda isboortiga. websaydh rasmi ah www.iddaa.com.t. 2004. Consnteltek Talyaniga Maalgashiga Teknolojiyada Internetka iyo Ganacsiga Inc.. Adeeg maadaama ay maamusho. Hadda, Barnaamijka Wadajirka ah ee Wadajirka Mareykanka wuxuu u maareeyay fursad si uu u sameeyo Ciyaaraha Sayniska ee Las Vegas ku saleysan 2019 Tan iyo Demirören iyo.
Balaayiin: Kulankii ugu horreeyay ee shabakadda sharadka ee khiyaanada ah ee ka ganacsada dalka Turkiga taasi waa. 2006 Waxay u adeegtaa maanta shabakadda aasaasay. Bilyoner Interactive Services Inc.. Waxaa maamula. % Labada shirkadood ee iskaashatada ah 50 saami ku leh. INTRALOT orak S.A. (A shirkad fadhigeedu yahay Griiga) iyo Çukurova Group One Elektaroonikada Inc (Heysashada Hitay) d xidhan. Websaydhka rasmiga ah ee www.bilyoner.co. lambarka adeegga macaamiisha (0212) 473 75 73.
Nene: Cinwaanka sharciga ah ee websaydhka Doğan Yayın Grubu Inc. waxaana qabtay Dheeka 'Ele Eleronronik': Tan ku samee www.nesine.co. Koobabka Bakhtiyaanasiibka Qaranka sidoo kale waxay u shaqeeyaan wakiilo elektiroonig ah, iyo lambarka adeegga macaamiisha elektiroonigga ah ee Jockey Club of Turkey 0850 5580558 la heli karo 2006 hawlgallada ka bilaabay gudaha.
Ciyaaraha Sansal Elektiroonigga ah iyo Daabacaadda Inc.. Isku laabashada Büyükada waxaa loo yaqaanaa wiil: Isku laab shirkadan. 2009 oo bixiya adeegyo khamaar khadka tooska ah ilaa iyo. websaydhka rasmiga ah ee www.misli.co. Lambarka taleefanka adeegga macaamiisha 220 33 66 0850.
Isbeddel ma jiro: Wax isbedel ah Inc. Waxaa maareeya Gaming. Cinwaankan rasmiga ah wuxuu u shaqeeyaa www.birebin.co. (0216) kaalmada adeegga macaamiisha 630 63 83 ama si toos ah ayaa loo isticmaali karaa Telefoon.
Faa'iidooyin wanaagsan oo la isku halleyn karo
Haddii aad rabto adeeg wanaagsan oo ku saabsan baahida loo qabo inaad gasho bartan boggan si aad u hesho dad lagu kalsoon yahay oo ku hela goobaha khamaarka. Iyada oo sharad lagu kalsoonaan karo aad jeceshahay, hal madal iyo cinwaanno dhammaan dariiqa soo gala goobaha dibedda, ka faa'iidayso fursadaha soo jiidashada leh si aad u aragto ikhtiyaarka ugu fiican. adeegyada, ayaa sheegay in ay awood u siineyso faa'iidooyin sarreeya oo leh heerar halis hoose maanta. Faa'iidooyinka goobaha la isku halleyn karo oo ugu fiican:
Khasaare hoose iyo halista maalgashiga,
gunooyin soo jiidasho leh iyo faa'iidooyin xayeysiin ah,
lacag bixin aamin ah iyo ciyaar / xulashada hodanka ah ee casino,
fursadaha kasbashada sareeya maalgashi hooseeya,
Xubinnimada soonka iyo xasilloonida,
sicirka sare iwm.
Isticmaalayaasha guryaha dhammaantood faa'iidooyinkan oo dhan, waxaa lagu bixiyaa dakhli maalgashi waxayna ilaashadaan lacagtooda markay doonayaan inay wax yeelaan. waxay sidoo kale leedahay fursado sare oo ah helitaanka qatarta ka imaan karta sare hadii ay jirto. luminta doorbidiisa iyo sabab kale oo aad u xiiso badan oo casinos iyo khamaarka adeegyada halista ah ayaa la gelin doonaa astaamaha khamaarka Bet loogu talagalay isticmaaleyaasha badan.
Rabitaanka in loo qoondeeyo faa'iidooyin xayeysiis oo ku filan xubin kasta si loo ilaaliyo xubnaha boggan waa khamaar ku habboon iyo sharadka tooska ah ee muujinta noocyada kala duwan..
Goobta Sharci Darrada ah
Maalmahan dadku waxay heli doonaan fursad ay ku kasbadaan lacag aad u sarreeya oo ay ku ciyaaraan sharadka sharci darrada ah. Haddii aad rabto inaad u ciyaarto si aad ugu guuleysato sharadyada sharci darrada ah, waa inaad dhaqsataa. Shirkad lagu kalsoonaan karo, Khamaarka xubin ka mid ah baxsad walba wuu bilaabi karaa. Soo bandhigyadan ayaa ah heer aad u sareeya, qaabka ayaa la door bidaa, maxaa yeelay shirkad sharci ah. si aad uga kasbato adoo bixinaya xoogaa lacag ah. Kaliya waa inaad xubin ka noqotid shirkadahaan waxaanan bilaabeynaa guuleysiga. Goobaha sharadka sharci darrada ah shirkadaha noocaas ah ee ku siiya gunno adiga ah, loo yaqaan. Sidan, noocyada ayaa lagu soo bandhigay si faahfaahsan hoosta waxayna noqon doonaan gunno.
Ku raaxayso tijaabooyinka oo sidoo kale loo yaqaan xulashada abaalmarinta deebaajiga koowaad. Nolosheena dabeecad ahaan waxay bixiyaan sharad bilaash ah. waxaa jira dhowr talaabo oo aad qaadi karto tan. Shirkadaha badankood waxay bixiyaan abaalmarin abaalmarin soo dhaweyn ah waxayna isku dayaan lacagta koowaad. waa tillaabooyinka aad u baahan tahay inaad qaado sida soo socota;
Ka faa iidaysan kartaa ololaha sidii xubin cusub oo ka mid ah khidmadaha ay bixiso shirkadda.
Gunno kasta oo dheeri ah oo gunno ah.
Shirkadda cusub ayaa laguu magacaabi doonaa oo waxaad isku dayi kartaa inaad tijaabiso gunnada fursadda haddii aad haysato.
la lumay, Lacagta gunnada ah ayaa laguugu soo celin doonaa koontadaada xitaa haddii aad lumiso.
Waa tan fursad lagu raaxeysto dhammaan xulashooyinka aan kor ku soo xusnay. Waxa lagu taliyay inaad ka mid noqoto shirkadaha xubinta ah haddii aad u baahan tahay inaad sameyso si aad u biloowdo isticmaalka gunnooyinka. Shirkadaha qaar ayaa hada qaata gunooyin. Waa maxay faa iidooyinka adeegga macaamiisha abuurista baahi loo qabo, yimaado xisaabta gunnada.
Maxaa loogu noolaan jiray Paris Ciyaar?
Maanta, sharad live loo baahan yahay. heerka ugu sareeya iyo inta aan ciyaarno 90 waxaa jira daqiiqado fursadaha sharadka. Sidaa darteed, paris paris waxaa doorbidaya sharciga goobaha. Iyada oo loo cuskaday qabanqaabada cusub, xulashooyinka sharadka tooska ah ayaa umuuqday kuwo la bixin karo.. wadooyinka sharci darrada ah ee paris maxaa yeelay waxaa jira xulashooyin badan oo loogu talagalay boggaga wanaagsan iyo sidoo kale heerarka dulsaarka. Haddii aad rabto inaad khiyaamo badan si aad ugu guuleysato goobta sharci-darrada ah, waxaan kula talin lahaa shirkadda inay sameyso. In sidan, Suuragal ma aha in si qumman loo ciyaaro oo meesha looga saaro khatarta luminta paris. Way fududahay in la gaaro goobta baarista haddii aad si dhow ula socoto faahfaahinta ku saabsan dhammaan macluumaadka. Waxaad ku jirtaa qaybta bartayada oo aad si fudud uga hubin karto degel kasta bog shaqo fiican. Waxay ku siin doontaa talaabooyinka lagama maarmaanka u ah sidii aad uheli lahayd qiimaha hantida Tani had iyo goor ma ahan mid la isku halleyn karo.
Khamaarka tooska ah weligiis kuma dhici doono xaqiijinta dukumiintiyada goobaha ciyaaraha. Ciyaar Jeckey ayaa marka hore ku raaxeyn kara asturnaanta qaabkan. Tan, waa fursad lagu arko talooyinka soo-jeedinta macaamiisha ee ugu fiican shirkadda. In sidan, Shirkaduhu waxay u arkaan xiiso weyn iyo fursad ay ku daawan karaan sida loo jecel yahay. Haddii ciyaartu ay bilaawdo xilli dhow adoo ku dhex wareegaya qeybta websaydhkeena, Shirkado ayaa Paris ka raadinaya shirkado.